“Korma Sambataa” – siifsiin
Qonnaan bulaan kun baruma baraan korma qalee nama waamee, sambata dhaabbata ture. Sababiin isaas Sambatni sooressa akka eeguuf, kan hin qabne’mmoo qabeenya kenna jedhee amana ture. Kana irraa kan ka’e jaarsoliin hooda kana yookiin dudhaa kana beekan akka isa eebbisaniif korma qalee waame.Kormi qalamu kunis Korma qonnaa hin jalqabne coomaa ture.Korma qalmaaf qophaa’e kana malee, gaafa Sambata dhaabbatu sanaaf buna qalaan,itittuun, aannan, booki(Daadhiin), farsoofi kan ayyaanichaaf barbaachisan hunduu qophaa`eera.
Dhiiga korma kanaa harkoo morma isaa jala ka`uun erga qeesee booda, quba’saa cuuphee morma isaa itti tuquudhaan “lubbuu na dheeressi !”jedhe.Adda isaas tuqee; “adda na jabeessi!” jedhee, sambata kadhate. Kana booddee gara manaatti ol galee, bidiruu muka urgeessaa irraa hojjatameefi baattuun issaa immoo muka waleensuu’rraa hojjetame irratti,dhiiga,buna qalaa, aannan,foon qaama kormicha qalame hunda irraa xiqqoo xiqqoo mummurame, haadha manaa isaa wajjin xebbee qophaa`e sana’rra kaa’an.Kana booda;”Yaa ayyaanaa sooradhu !” jedhanii dhibaafatan.
Previous Previous post: SIIQQEE
Next Next post: Imaanaa